समाजसेवा आफ्नो पैसाले गर्ने हो,अरुले दिएको बाँडने होईन । - betanadaily.com
खेमप्रसाद गौतम (अध्यक्ष,लायन्स क्लब अफ बेलबारी)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ०४, २०७८ समय: ०:३७:५५
बेलबारी । मोरङको बेलबारीमा खेमप्रसाद गौतम कुनै नौलो नाम होईन । दर्जनौ सामाजिक संघसंस्थाको कुशल नेतृत्व गर्दै पछिल्लो समय सर्बाधिक रुपमा उहाँको चर्चा समेत भयो । बेलबारी लायन्सले ७ बर्षअघि खरिद गरेर ब्यत्तिलाई बिक्री गरेको एम्बुलेन्स खोजी गर्ने र बेलबारीमा फिर्ता ल्याउने कार्यमा सफल बनेपछि बेलबारीमा गौतमको चर्चा थप चुलिएको हो ।
बि.स २०३८ कार्तिक १९ बिहिबार मोरङको तत्कालीन डाँगीहाट गाँउ बिकास समिति वडा नम्बर ५ लक्ष्मीमार्ग (शनिबारे बजार ) छेउ हाल बेलबारी नगरपालिका ११ लक्ष्मीमार्गमा मातापिता स्व.भीमप्रसाद र चन्द्रमाया गौतमको कोखबाट कान्छो सुपुत्रका रुपमा जन्मिनुभएका गौतमले सुकुना बहुमुखी क्याम्पस सुन्दरहरैचाबाट प्रबिणता प्रमाणपत्र तह,२०५६मा उर्तिण गर्नुभएको छ ।
२०५८ सालमा वैदेशिक रोजगारीको सिलशिलामा पहिलोपटक मलेसिया ३ बर्ष त्यसपछि कतार ४ बर्ष र साउदीमा ८ बर्ष,सुपरभाईजरको रुपमा काम गरेको उहाँसँग अनुभव छ । बि.स २०७२ मा नेपाल फर्किएपछि उहाँले होटल ब्यबसाय शुरु गरेर हालसम्म निरन्तरता दिईरहनुभएको छ । बेलबारीमा सञ्चालित जक्सन होटल रेष्ट्रो एण्ड गेष्ट हाउस सञ्चालक समेत रहनुभएका उहाँले ब्यबसाय सँगै सामाजिक काममा समेत उहाँ उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ । हाल गौतम सेवा समाज मोरङको सचिब,होटल ब्यबसायी संघको क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष,बेलबारी जेसिज संस्थापक सदस्य र लायन्स क्लब बेलबारी २०२० । २१ का अध्यक्ष हुँदै हाल ड्रिष्ट्रिक चेयर पर्सनका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । लायन्स क्लबको अध्यक्ष भएपछि डिजी क्लब भिजिट गराउन सफल गौतमलाई (जिटिए) अन्तराष्ट्रिय अवार्ड समेत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँसँग बेलबारी लायन्स लगायत समग्र बिषयमा गरिएको संवादका सम्पादित अंशहरु –
समाजसेवामा कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
यो बिषयमा कुरा गार्द म अलिकति बाल्यकाल तिर फर्किन्छु । जतिबेला म ७ बर्षको थिँए । म त्यस बेला म खसीको मासु खान्थे, । त्यहिबेला मेरा शरिरका अंगहरु चल्न छोडे । म कुँजो जस्तै भएँ । त्यसबेला मेरो उपचारका लागि धेरै तिर लगियो तर निको भएन । त्यहिबेला मेरो समस्या थाह पाएका एकजना छिमेकीले मलाई गाँउकै एकजना धामीकहाँ लानुभयो । मैले त्यसपछि खसीको मासु नै खान छाडे । नभन्दै मेरो समस्या ठिक पनि भयो । मेरो मनमा त्यहिबेला एउटा भावना बिकास भयो,कि समस्यामा परेका मानिसहरुलाई सहयोग गर्यो भने समस्या समाधान हुने रहेछ । त्यहिबेला मैले सोचे कुनैदिन मैले पैसा कमाएँ भने म पनि समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्छु । पैसा दिएर होस वा अन्य कुनै सहयोग । त्यहिबेलादेखि म समाजसेवामा आकर्षित भएँ । पछि त्यो कुराले मुर्तरुप पायो ।
ब्यबसायमा पो नाफा छ त समाजसेवा के छ र लाग्नुभयो ?
ब्यबसायमा घाटा भयो भने त ब्यबसाय नै चल्दैन नि,त्यहि केही रकम नाफा भयो भने त्यहि नाफाबाट समाजसेवा गर्ने हो नी,अर्काको पैसामा गरिएको समाजसेवा त समाजसेवा नै हैन नि,आफै कमाएर दिएको पो समाजेवा हुन्छ त,यहाँ त अरुको पैसामा समाजसेवा गर्नेहरु छन ।
पहिलो समाजसेवा के थियो याद छ ?
म विदेशमा रहँदा थुप्रै साथीहरु अबैध रुपमा बस्नुभएको थियो । मैले उहाँहरुलाई नेपाल फर्काउन सहयोग गरेको छु । लगभग १ सय बढी त्यस्ता समस्यामा हरेका साथीहरुको उद्धार गरेको छु । सायद लाग्छ,त्यहि मेरो पहिलो समाजसेवा होला ।
बेलबारी लायन्सको अध्यक्ष हुनुहुन्छ,पछिल्लो अबस्थाका बारेमा भनिदिनोस न ?
सबैभन्दा पहिला त म लायन्सको शुरुवाती चरणमा जान्छु,जतिबेला म लायन्सको अध्यक्ष भएँ । क्लबको सम्पत्तिका रुपमा केही पनि थिएन । त्यसबेला लायन्सको घण्टी,माला,झण्डा,स्टयाम्प केही पनि थिएन । एउटा माईन्युट समेत नभएको क्लबमा म अध्यक्ष भएपछि क्लबकै पदाधिकारीहरुले ७ बर्षअघि बेचेको एम्बुलेन्स खोजी गर्नेदेखि फिर्ता ल्याएको छु । साथै क्लबको नाममा आबश्यक सबै सामाग्रीहरु खरिद गरेको छु । क्लबको नाममा बेलबारी ११ लक्ष्मीमार्गमा २ कठठा जमिन समेत उपलब्ध गराएको छु ।
बेचिएको एम्बुलेन्स कसरी फिर्ता गर्नुभयो ?
बेचिएको एम्बुलेन्स फिर्ता ल्याउन त्यति सहज थिएन । सबैभन्दा शुरुमा मैले एम्बुलेन्स बिक्रीमा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई पटक पटक फिर्ता ल्याउन आग्रह गरेँ । उहाँहरुले उल्टै मलाई नै हप्कीदप्की गर्नुभयो । मैले त्यसपछि मिडियाको साहारा लिँए । त्यसपछि अलि सहज भयो । अन्तमा एम्बुलेन्स फिर्ता भयो । जुन एम्बुलेन्स बेलबारीका कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउन प्रयोग भएको छ । यो देख्दा खुसी समेत लागेको छ ।
बेलबारी लायन्सले अहिलेसम्म के के गर्यो ?
बेलबारी लायन्सले सबैभन्दा शुरुमा त बेचिएको एम्बुलेन्स फिर्ता ल्याउन सफल भयो । सम्पत्तिका नाममा केही पनि नभएको क्लबले सबै आबश्यक सामाग्री सहित २ कठठा जग्गा समेत प्राप्त गरेको छ । यसका अलावा गत बर्षको चैतमा बेलबारीमा माक्स,सेनिटाईजर,साबुन बितरण,क्यान्सरपिडित रमा श्रेष्ठलाई २० हजार नगद सहयोग,दुवै मिर्गौला फेल भएका प्रबिन गिरीलाई १८ हजार नगद सहयोग,बेलबारी ८ र १० मा २ किलोमिटर ट्राफिक सिग्नल निर्माण,बेलबारी ८ राधानगरमा बृहत रक्तदान,बेलबारी ९ मा म्याराथुन दौड,बेलबारीमा मैत्रीपुर्ण फुटबल आयोजना, बेलबारी ३ मा रहेको श्री आधारभुत बिद्यालयमा अध्यायनरत ६० जना बिद्यार्थीलाई स्वीटर तथा शैक्षिक सामाग्री र खाद्यन्न बितरण,बेलबारी १ का द्रोर्णबहादुर सार्कीको धरानस्थित बिपि प्रतिष्ठानमा एम्बुलेन्स सहित निशुल्क उपचार लगायत यो पटकका महामारीमा समेत सुनसरकिो ईटहरीमा स्वास्थ्य सामाग्री र बेलबारीका फ्रन्टलाईनरलाई समे स्वास्थ्य सामाग्री बितरण गरिएको छ ।
आगामी योजनाहरु के के छन ?
आगामी योजनाहरु निरन्तर रुपमा सामाजिक काममा नै क्रियाशिल रहने हो । यो वा त्यो योजना भन्दा पनि आबश्यकता अनुसार सामाजिक कार्यहरुमा निरन्तर क्रियाशिल हुने हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार जिल्लाभित्र भएका डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालका प्रमुखसँग गरेको छलफलमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय...